Isbahaysiyada Jabuuti oo qabtay isu-soo-baxyo doorasho - Sabahionline.com
Isbahaysiyada Jabuuti oo qabtay isu-soo-baxyo doorasho
Febraayo 12, 2013
Saddexda isbahaysi-siyaasadeed ee Jabuuti ayaa qabtay ololayaal doorsho Axaddii iyo Isniintii (10-kii iyo 11-kii February), ka hor doorashooyinka barlamaaniga ah ee 22-ka February.
Isbahaysiga talada haya ee Jabuuti oo sheegtay guul, iyadoo ay mucaaradkuna ka cabanayaan wax is-daba-marin
Xisbiga talada haya ee Jabuuti oo diiday codsiga mucaaradka ee ah in la sii daayo maxaabiista siyaasadeed
Xisbiyada siyaasadda Jabuuti oo furay wadahadal
Isbahaysiga mucaaradka ah ee Midowga Badbaadada Qaranka (USN), oo horay loogu yiqiin Midowga Barakaysan ee Isbaddalka, ayaa socod ku qabtay Balbala Axaddii, kaas oo uu horkacayay Ismaaciil Geedi Xareed, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka Jabuuti. Iyada oo ay ku hareeraysan yihiin taageerayaal ku labisan midab burtuqaali ah, ayay murashaxiinta USN waxa ay ku celiyeen rabitaankooda ay ku doonayaan doorasho u dhacda si xor ah oo caddaalad ah. "Xilligii ay madaxdu awoodda ku qabsan jireen awoodda waa uu dhammaaday rabitaanka dadkuna waa in lagu muujiyaa isbaddal," ayuu yiri Xareed.
Sidoo kale Axaddii, Ilyas Moussa Dawaleh, hoggaamiyaha isbahaysiga Modowga Aqlabiyadda Madaxtooyada (UMP), ayaa Istaadiyamka Guuleed taageerayaal ku labisan dhar cagaar ah u soo bandhigay murashaxiinta isbahaysiyga, sidaana waxa sheegay La Nation-ka Jabuuti. Hoggaamiyayaasha UMP ayaa waydiistay dadka Jabuuti in ayan ku khatalmin ballamaha xisbiyada mucaaradka. "Mahadi ha ka gaadhee siyaasadihii uu meel-mariyay Madaxwyene Ismaaciil iyo xisbiyada uu ka kooban yahay isbahaysigan, maanta dalkeennu horay ayuu u sii socdaa, wuu isbadalayaa waana uu is dhisayaa, mustaqbalkiisuna waa uu ifayaa," ayuu yiri Xasan Siciid Goumaneh, oo ah mid ka mida murashaxiinta ugu miisaanka culus isbahaysiga UMP.
Isbahaysiga dhexdhexaadka ah ee Dimuqraadiyiinta ku Midoobay Bartamaha (CDU) ayaa taageerayaashiisa Isniintii kula kulmay garoonka minishiibiyada ee Farah Had, iyada oo uu hoggaaminayay Cumar Cilmi Khayreh. Khaireh ayaa ugu baaqay taageerayaasha in ay u codeeyaan doorashooyinka soo socda, isaga oo naqdiyay dhibaatooyinka uu keenay maamulka haatan talada haya, sida musuqmaasuqa, qabyaaladda iyo eexda, kuwaa oo uu ku tilmaamay in ay xagal-daacinayaan horumarka dhaqaale ee Jabuuti.
Olalaha doorashooyinka ayaa furmay Jimcihii (8-dii February) waxayna socon doonaan laba todobaad. Tani waa doorashadii ugu horreeysay ee ka dhacda Jabuuti iyada oo aan lagu dhaqmayn hannaanka liiska aqlabiyadda, waxana la filayaa in xisbiyada lata tirada badan yahay cod kii hore ka badan laga siiyo xukuumadda.